कसरी किन जाडो आउँछ छोराछोरी गर्न व्याख्या गर्न?
सबैका लागि मौसम को परिवर्तन को लागि कारण सान्दर्भिक हुन्छन्। बाल्यकाल मा पहिले नै बच्चा प्रश्न गर्न थाल्छ। जाडो किन आउँछ? हाम्रो ग्रह के भइरहेको छ? विभिन्न देशहरूमा किन फरक जलवायु छ?
पहिलो र मुख्य व्याख्या मानव Habitation लागि इष्टतम climatic अवस्था सिर्जना हुन्छ। माथि को मौसम सम्पूर्ण ग्रह को तापमान रहन सहज बन्नेछ।
मौसम खगोल विज्ञान को परिवर्तन संकेत?
वसन्त, गर्मी, शरद ऋतु, जाडो - यो अनन्त र गैर-हटाउन सकिने प्राकृतिक घटना हो। यस्तो प्राकृतिक घटना को कारण ठाउँ मा विश्व को आन्दोलन बन्नेछ। पृथ्वी एक लम्बी सर्कल को आकार छ जो एक पारंपरिक कक्षा मा उत्प्रेरित गर्छ।
दुर्भाग्यवश, धेरै मान्छे अझै पनि STEREOTYPES स्कूल कार्यक्रम, जाडो आउँछ किन एक विवरण, सवारी चलाउँदा लगभग र ग्रह हटाउन सूर्य देखि रूपमा सेवा जहाँ बाँचिरहेका छौं।
खगोलविद लामो यो सिद्धान्त disproved र परिवर्तन कारण ग्रह को परिक्रमा अक्ष गर्न हुन्छ कि तर्क गरिएको छ। त्यो 23 डिग्री मा लगाइदिए छ, त्यसैले सूर्य गरेको रेज विभिन्न समयमा पृथ्वीको unevenly विभिन्न भागहरु गर्मी।
किन जाडो धेरै चिसो छ?
सूर्य वरिपरि आफ्नो कक्षा मा धरती को आन्दोलन एक वर्ष वा 365 दिन लाग्छ। सम्पूर्ण आन्दोलन ग्रह परिक्रमा समयमा हुन्छ कि आफ्नो ससर्त अक्ष कार्य दिन र रात को कारण।
उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य तिर पारिएको छ, यो दक्षिण मा यस्तो रेज पृथ्वीको सतह मा "आकस्मिक" पतन हुनेछ गर्दा, रेज अधिकतम नम्बर हुन्छ।
शरद ऋतु, जाडो - पृथ्वी सूर्य देखि अधिकतम दूरी छ जब यी समय अवधि हो। दिन छोटो हुन्छ, र सूर्य चमकता छ, तर न्यानो छैन।
स्वर्गीय शरीर देखि गर्मी को न्यूनतम रकम सजिलै व्याख्या गर्न सकिन्छ। को रेज सतह मा obliquely गिर, सूर्य बादल मडारिरहेको कम छ, त्यसैले हावा ढिलो वार्मिंग हुनेछ।
के हिउँदमा हावा जनता हुन्छ?
हावा तापमान कम छ, एक चिस्यान परिवर्तन, वाष्प को कमी छ। वायुमण्डलीय पानी वाष्प एकाग्रता घट्छ गर्दा जाल गर्मी गर्ने क्षमता पनि पृथ्वीको सतह मा एक न्यूनतम कम छ।
पारदर्शी वायुमण्डलीय हावा ठूलो ताप र हावा र जमीन सतह कार्य जो इन्फ्रारेड विकिरण, अवशोषित सक्षम छैन। किन जाडो चिसो? बस सतह र हावा न्यूनतम मात्रा पहिले नै लागू छ जो गर्मी, राख्ने सक्दैन किनभने।
केही जाडो सूर्य?
यो जाडो लागि परिवर्तन, सूर्य को बच्चाहरु व्याख्या गर्न अति महत्त्वपूर्ण छ। यो एक विशाल, चमकिलो तारा, ग्रह को जो वरिपरि ठूलो संख्या छ - त्यहाँ सूर्य भन्ने तथ्यलाई मा जोड हुनुपर्छ।
सूर्य यसलाई बस ढल्छ र तिनीहरूलाई नाश रूपमा एउटा विशाल तापमान, कुनै पनि व्यक्ति वा वाहन भेट्नुपर्छ सक्दैन छ।
पृथ्वी जीवन मा सौर ऊर्जा रेज धन्यवाद सम्भव छ: रूखहरू, प्रत्यक्ष जनावर र मान्छे। सूर्य गरेको गर्मी बिना सबै जीवित कुराहरू छोटो अवधिमा मर्नेछन्।
सौर ऊर्जा र न्यानो जाडो रेज रूपमा तीव्र छैनन्, तर यो छाला थप हानि पुऱ्याउन सक्छ। - प्रकाश र दर्पण, हिउँ समेटिएका रूपमा रेज विचार गर्नुपर्छ जो ग्रह, सम्पूर्ण सतह: यो सुविधा एक तार्किक व्याख्या छ। मानव शरीर - यो पराबैंगनी रेज प्राप्त प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन र सक्रिय तिनीहरूलाई saturate। डाक्टर को जाडो समयमा तन गर्मी भन्दा बढी खतरनाक छ भनेर जोड। सूर्य देखि छाला यूवी Oversaturated र पनि बल्न सक्छन्।
जाडो बारेमा रोचक तथ्य
हिउँदमा सेट किन, छोराछोरी र वयस्क खगोल विज्ञान को मूल कुराहरू थाह द्वारा बताए गर्न सकिन्छ। तर एक जाडो प्रकृति को जाडो बारेमा केही रोचक तथ्य poses र मान्छे विज्ञान लागि परिचित छन्?
Snowflakes। वैज्ञानिकहरूले बारम्बार भन्ने पृथ्वीको सतह मा गिरावट को snowflakes छानबीन छन्। यो काम विशेष प्रशिक्षण, उपकरण र विनम्रता आवश्यक छ। तारा क्रिस्टल, सुई, स्तम्भहरू, स्तम्भहरू सुझाव, पारदर्शी dendrites, अनियमित आकारको हिमपात संग: snowflakes7प्रकार हुन सक्छ कि मानिसहरूलाई खुला थियो।
बरफ ठूलो को गति। हिउँ धेरै लागि - एक नरम, वायुमय पदार्थ तर हिउँ ठूलो प्रशस्त उहाँले एक हिमस्खलन को रूप मा पृथ्वीको सतह संग गर्न सकिन्छ। न्यूनतम गति यस्तो avalanches - 80 मी / घन्टा, अधिकतम - 360 मी / घन्टा। हिउँ एक विशाल आम यसको बाटो मा सबै टाढा उड्ने। एक हिमस्खलन एक व्यक्ति हिट भने, उहाँले किनभने सरासर वजन वा अक्सिजन को अभाव को मर्छ।
किन जाडो आउँछ ग्रह प्रश्न को जनसंख्याको सबैभन्दा लागि, यो सान्दर्भिक छ। तिनीहरूले पनि आकस्मिक तापमान परिवर्तन के उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ थाहा छैन, को संकेतक हिउँ परिरहेको गर्नुपर्छ, तल0जानेछ। केही ट्रपिकल देशहरूमा राज्यहरू आफ्ना प्रजालाई मनोरन्जन गर्नु गर्न चीनी को कृत्रिम हिउँ मा खेल संगठित।
जाडो किन आउँछ? यो प्रश्न ढिलो होस् वा चाँडो प्रत्येक बच्चालाई सोध्छन् हुनेछ। पेश सामाग्री प्रयोग गरेर, प्रत्येक अभिभावक सजिलै र रोचक उहाँलाई यो प्रश्न गर्न जवाफ गर्न सक्षम हुनेछ।
सेन्ट Vasiliya Blazhennogo को संक्षिप्त विवरण: एक निबंध
माल्दिभ्स राजधानी, मौसम, छुट्टी
स्कूल लागि आवश्यक स्टेशनरी: सूची
कंगो कस्तो छ? देश कंगो। कंगो नदी
औषधि "varenicline"। प्रयोग र वर्णन लागि निर्देशन
Zantina होटल2* (Crete, ग्रीस): होटल, सेवा, को विवरण
एम्मा Roberts (एम्मा Roberts): जीवनी, Filmography र अभिनेत्री को व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
Sympato adrenal संकट
औषधि "Nimesil" (analogues): फाइदा र बेफाइदा
थियोटोकोस - क्रिसमस मठ, व्लादिमीर को शहर। रेक्टर हेग्युमेन सिरिल
गुआंगजौ: बजार जाने लायक
सञ्झ्याल नियामक ("केलिना") काम गर्दैन: सम्भावित ब्रेकडाउन र उनीहरूको उन्मूलन
ठेउला - लक्षण, पाठ्यक्रम र उपचार
प्रयोग को लागि कस्मेटिक्स सेट, वा धन
एलर्जी: बच्चाहरु को उपचार, साथै रोग को कारण